Ambassador of Myanmar presents his Credentials to Her Majesty Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the faith – Ministry of Foreign Affairs
Ambassador of Myanmar presents his Credentials to Her Majesty Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the faith
U Kyaw Zwar Minn, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, presented his Credentials to Her Majesty Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the faith, on5March 2014 in London.
Dated. 12 March 2014
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့် မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စွာမင်းသည် ၎င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် လန်ဒန်မြို့၌ ဓနသဟာယနိုင်ငံတို့၏ နာယက၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ မြောက်အိုင်ယာလန်နှင့် ၎င်းစိုးပိုင်သည့် အခြားနယ်ပယ်များ အရှင် ဒုတိယမြောက် အယ်လဇ္ဇဘက်ဘုရင်မထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်